Naphazoline + Pheniramine : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Naphazoline + Pheniramine ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Naphazoline + Pheniramineကိုဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ မျက်စိနီရဲခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ မျက်ရည်ယိုခြင်းစတဲ့ လက္ခဏာတွေ သက်သာစေဖို့ အဓိကအသုံးပြုပါတယ်။Naphazoline ဟာsympathomimetic (alpha receptor agonist) အုပ်စုဝင်ဖြစ်ပြီးမျက်စိသွေးကြောတွေကိုယာယီကျဉ်းမြောင်းစေတဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။
Pheniramine ကတော့ antihistamine အုပ်စုဝင်ဖြစ်ပြီးဓါတ်မတည့်တုန့်ပြန်မှုလက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ histamine ထွက်ရှိမှုကိုတားဆီးပေးပါတယ်။
ဒီဆေးဝါးကို မျက်ကပ်မှန်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ မျက်စိနီရဲခြင်း၊ ကျိန်းစပ်ခြင်းတို့ကိုကုသရာမှာအသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
Naphazoline + Pheniramine ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Naphazoline + Pheniramineမျက်စဉ်းဆေးအသုံးမပြုမီလက်အရင်ဆေးပါ။ ဆေးပုလင်းထိပ်ဝကို မျက်လုံး၊ မျက်ခွံ၊ အရေပြား စတာတွေအပါအဝင် အခြားဘာနဲ့မှ မထိတွေ့ပါစေနဲ့။
မျက်စဉ်းမခပ်မီမျက်ကပ်မှန်ချွတ်ပါ။ ဆေးခပ်ပြီးအနည်းဆုံး ၁၀မိနစ်ကြာမှ ပြန်တပ်ပါ။ အကယ်၍ မျက်စိနီရဲနေခဲ့ရင် မျက်ကပ်မှန်ပြန်တပ်ဖို့ သင့်မသင့် သင့်ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းပါ။
မျက်စဉ်းမခပ်မီပုလင်းထဲကဆေးရည်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါ။ ဆေးရည်အရောင်ပြောင်းနေရင်၊ အရောင်နောက်နေရင်၊ ဆေးပုလင်းယိုစိမ့်နေရင်၊ အမှုန်အမွှားတွေ ရှိနေရင် ဆက်လက်အသုံးမပြုပါနဲ့။ ကလေးငယ်တွေ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေ လက်လှမ်းမမီနိုင်တဲ့နေရာမှာစွန့်ပစ်ပါ။
မျက်စဉ်းဆေးရည်ကိုမိမိလိုအပ်သလိုတစ်နေ့ ၄ကြိမ် ဖြစ်စေ၊ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေအသုံးပြုပါ။
မျက်စဉ်းခပ်တဲ့အခါ ခေါင်းကိုနောက်သို့လှန်ပြီးအပေါ်ဘက်ကိုကြည့်ပါ။ အောက်မျက်ခွံကိုလက်နဲ့အသာဆွဲပါ။ ဆေးပုလင်းထိပ်ဝကို မျက်လုံးပေါ်တည့်တည့်ရောက်အောင်ထားပြီးဆေးစက်ချပါ။
မျက်လုံးထဲဆေးရည် ကောင်းစွာစိမ့်ဝင်သွားအောင် မျက်စိမှိတ်ထားပြီးမျက်လုံးအတွင်းဘက်ထောင့်ကိုတစ်မိနစ်၊ နှစ်မိနစ်ခန့် လက်နဲ့အသာအယာဖိပေးပါ။ မျက်တောင်ခတ်ခြင်း၊ မျက်လုံးကိုလက်နဲ့ပွတ်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနဲ့။ နောက်တစ်စက် ထပ်ချဖို့လိုရင်ဖြစ်စေ၊ နောက်မျက်လုံးတစ်ဖက်အတွက် အသုံးပြုလိုရင်ဖြစ်စေအထက်ပါနည်းအတိုင်းအဆင့်ဆင့်ပြန်လည်ပြုလုပ်ပါ။
ဆေးစက်ချကိရိယာကိုသို့မဟုတ် ဆေးပုလင်းကိုမဆေးကြောပါနဲ့။ အသုံးပြုပြီးတိုင်းအဖုံးလုံအောင်ပြန်ဖုံးပါ။
Naphazoline + Pheniramineအသုံးပြုပြီးအနည်းဆုံး ၅မိနစ်ကြာမှ နောက်ဆေးတစ်မျိုး (အခြားမျက်စဉ်းဆေးရည် သို့မဟုတ် ဆေးအဆီ) ဆက်လက်အသုံးပြုပါ။ ဒီလိုအသုံးပြုရာမှာလည်းမျက်စဉ်းဆေးရည်ထည့်ပြီးမှ ဆေးအဆီထည့်ပါ။
Naphazoline + Pheniramine ကိုလိုတာထက်ပိုသုံးမိရင် မျက်စိပိုမိုနီရဲလာနိုင်တဲ့အန္တရာယ် ရှိပါတယ်။ ဒီဆေးရည်ကိုတစ်ကြိမ်မှာ ၃၊ ၄ရက်ထက်ပိုပြီး ဆက်တိုက်မသုံးပါနဲ့။ ဆေးအသုံးပြုနေစဉ် မျက်စိနီရဲလာခဲ့ရင်၊ ၇၂နာရီကြာပြီးတဲ့အထိ မျက်စိဝေဒနာ မသက်သာခဲ့ရင် ဒါမှမဟုတ် ပိုဆိုးလာခဲ့ရင်၊ ပြင်းထန်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုခု ဖြစ်ပေါ်နေပြီလို့ သံသယရှိခဲ့ရင် မျက်စဉ်းဆေးရည်အသုံးပြုခြင်းကိုချက်ချင်းရပ်လိုက်ပြီးအရေးပေါ်ဆေးကုသမှု အမြန်ဆုံးခံယူပါ။
Naphazoline + Pheniramine ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Naphazoline + Pheniramine ကိုအခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Naphazoline + Pheniramineကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။Naphazoline + Pheniramineဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Naphazoline + Pheniramineကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Naphazoline + Pheniramine အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အကယ်၍ သင်ဟာNaphazoline သို့မဟုတ် Pheniramine သို့မဟုတ် အခြားအရာတစ်ခုခုနဲ့ ဓါတ်မတည့်ဘူးဆိုရင် ဒီဆေးအသုံးမပြုခင် သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို ကြိုတင်အသိပေးပါ။ ဒီဆေးဝါးမှာ ဓါတ်မတည့်တုန့်ပြန်မှုအပြင် အခြားပြဿနာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ (ဥပမာ benzalkonium chloride လို ကြာရှည်ခံစေတဲ့ပစ္စည်းတွေ) ပါဝင်နေနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကသင့်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
ဒီဆေးအသုံးမပြုခင် သင့်ကျန်းမာရေးရာဇဝင်အကြောင်း သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်သိအောင် ပြောပြထားပါ။ အထူးသဖြင့် သင့်မှာ နှလုံးရောဂါ (ဥ့မာ နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရဖူးခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း)၊သွေးတိုးရောဂါ၊ မျက်စိရေတိမ်၊ သွေးချိုဆီးချို၊ မျက်စိပိုးဝင်ခြင်း/ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းအလုပ်လုပ်လွန်းခြင်း (သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများခြင်း)၊ ဆီးသွားရခက်ခဲခြင်းစတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေရင် သင့်ဆရာဝန်ကို မဖြစ်မနေအသိပေးပါ။
ဒီဆေးဝါးဟာ သင့်ရဲ့အမြင်အာရုံကို ယာယီေဝဝါးစေနိုင်တဲ့အတွက် ဆေးအသုံးပြုပြီးကိုယ့်အခြေအနေကိုယ် မသိရသေးသရွေ့ အမြင်အာရုံကောင်းမွန်ဖို့လိုအပ်တဲ့တာဝန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ (ဥပမာကားမောင်းခြင်း၊ စက်ယန္တရားအသုံးပြုခြင်း) မပြုလုပ်မိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဒီဆေးဝါးကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲအသက် ၆နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေအတွက် အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဒီဆေးဝါးကို အမှန်တကယ်လိုအပ်မှသာအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ဆေးကြောင့်ရလာနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ဖို့ သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ဒီဆေးဝါးဟာ မိခင်နို့ရည်ထဲ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းရှိမရှိသေသေချာချာမသိရသေးတဲ့အတွက် မိမိရင်သွေးကို နို့မတိုက်ခင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Naphazoline + Pheniramine ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးအသုံးမပြုမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် Cရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။
Naphazoline + Pheniramine ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Naphazoline + Pheniramineကြောင့် မျက်စိစပ်ဖျင်းဖျင်းဖြစ်ခြင်း၊ သူငယ်အိမ်ကျယ်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံေဝဝါးခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ အချိန်ကြာတဲ့အထိဒီလက္ခဏာတွေ မပျောက်နိုင်ရင် ဒါမှမဟုတ် ပိုဆိုးလာရင် သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးပါ။
ဒီဆေးကြောင့်ရလာနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုးရလဒ်တွေကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးထက် ပိုအလေးသာတဲ့အတွက်ကြောင့်သာသင့်ဆရာဝန်က ညွှန်းပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအမြဲသတိပြုပါ။ ဒီဆေးအသုံးပြုသူအများစုဟာ ပြင်းထန်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဒဏ် ခံစားရလေ့မရှိပါဘူး။
Naphazoline + Pheniramine အသုံးပြုပြီးကတုန်ကယင်ဖြစ်ခြင်း၊ နှာလုံးခုန်မြန်ခြင်း/ ကြမ်းခြင်း/ မမှန်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ချွေးပြန်ခြင်း၊အားနည်းခြင်း၊ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ခြင်း၊ မျက်စိဝေဒနာ (နီရဲခြင်း/ယားယံခြင်း/ရောင်ရမ်းခြင်း) ပိုဆိုးရွားလာခြင်း၊ မျက်စိနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ အခြားအမြင်အာရုံပြဿနာများစတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလက္ခဏာတွေ ပေါ်လာခဲ့ရင် သင့်ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါ။
ဒီဆေးဝါးကြောင့်ပြင်းထန်တဲ့ဓါတ်မတည့်တုန့်ပြန်မှု ဖြစ်ခဲပေမယ့် ဆေးအသုံးပြုပြီးအဖုအပိမ့်အနီကွက်များထွက်ခြင်း၊ မျက်နှာ၊ လျှာ၊ လည်ချောင်းစသည်တို့ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ ဆိုးဆိုးရွားရွား မူးဝေခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတစ်စုံတစ်ရာပေါ်လာခဲ့ရင် အရေးပေါ်ဆေးကုမှု အမြန်ဆုံးခံယူပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Naphazoline + Pheniramine နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Naphazoline + Pheniramineနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုနိုင်တဲ့ အချို့ဆေးဝါးတွေကတော့ MAO inhibitors (isocarboxazid, linezolid, methylene blue, moclobemide, phenelzine procarbazine, rasagiline, safinamide, selegiline, isocarboxazid, tranylcypromine), သွေးတိုးကျဆေးများ (ဥပမာguanethidine)၊tricyclic အုပ်စုဝင် စိတ်ကျဝေဒနာသက်သာဆေးများ (ဥပမာ amitriptyline) တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Naphazoline+ Pheniramine ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Naphazoline + Pheniramine နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Naphazoline + Pheniramine နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Naphazoline + Pheniramine ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
တစ်ကြိမ်လျှင် Naphazoline hydrochloride ဝ.၀၂၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ Pheniramine maleate ဝ.၃ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်သည့် မျက်စဉ်းဆေးရည် ၁စက် သို့မဟုတ် ၂စက်၊ တစ်နေ့ ၄ကြိမ်အထိ အသုံးပြုရန်
ကလေးတွေအတွက် Naphazoline + Pheniramine ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးလူနာများမှာဘယ်လောက်အချိုးအစားပေးရမလဲဆိုတာအတည်မပြုရသေးပါ။ သင့်ကလေးငယ်အတွက် အသုံးပြုရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်မှာစိတ်ချရမှုအနေအထားကိုအပြည့်အဝနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Naphazoline + Pheniramine ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Naphazoline + Pheniramineကိုမျက်စဉ်းဆေးရည်ပုံစံဖြင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Naphazoline + Pheniramineကိုအသုံးပြုဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးအသုံးပြုပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်မျက်စဉ်းဆေးခပ်ရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲခပ်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးခပ်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Naphazoline-Pheniramine Drops. https://www.webmd.com/drugs/2/drug-2734/naphazoline-pheniramine-ophthalmic-eye/details. Accessed March 23, 2018.
Naphazoline and Pheniramine. https://www.drugs.com/cdi/naphazoline-and-pheniramine.html. Accessed March 23, 2018.